कोरोना भाइरस बारे भ्रामक सूचनाको तथ्यजाँच - South Asia Check
कोरोना भाइरस बारे भ्रामक सूचनाको तथ्यजाँच
South Asia Check / बिहीबार, फाल्गुण २९, २०७६
ललितपुरको पुल्चोकमा विहिबार विहान मास्क लगाई हिँडेका मानिस तस्बिर: साउथ एसिया चेक
कुनै पनि महामारी सँगसँगै भ्रामक सूचना र हल्ला–अफवाहको पनि महामारी फैलिने गर्छ । फागुन २८ गते विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने कोभिड-१९ लाई प्यान्डेमिक अर्थात् विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको छ । नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी बन्दै गर्दा यसबारे गलत सूचना (विश्व स्वास्थ्य संगठनको भाषामा ‘इन्फोडेमिक’) पनि उत्तिकै द्रुत गतिमा फैलिएको छ । फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल र ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरजस्ता च्याट समुह अनि यूट्यूब च्यानलहरुमा कोरोना भाइरसको बारेमा गलत सूचना फैलिरहेका छन् । त्यसरी फैलिएका केही भ्रामक सूचनालाई हामीले चिर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
भिटामिन सीको सेवन गरेमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ ?
भिटामिन सीले सामान्य रुघाखोकी निको पार्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । केही अध्ययनहरुले यसले जीवाणु र भाइरससँग लड्न मद्दत गर्ने पत्ता लगाएका छन् । तर यसकोे सेवनले कोरोना भाइरस निको हुन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित होइन ।
यो भाइरस सर्प र चमेराका कारण उत्पन्न भएको हो ?
कोरोना भाइरस ठ्याक्कै केबाट मानिसमा सर्‍यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) का अनुसार जनावरबाट यो भाइरस मानिसमा सर्ने सम्भावना विरलै हुन्छ । चीनको वुहान शहरबाट फैलिएकोले त्यहाँको समुद्री खाना र जनावरको बजारमा रहेका सालकबाट मानिसमा सरेको अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसको पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय संक्रमितहरुको त्यस्ता पशु बजारसँग सम्पर्क नभएको पाइएको छ । अनुसन्धाताहरुले ‘जिरो प्यासेन्ट’ भनिने सबैभन्दा पहिले संक्रमित व्यक्तिको खोजी जारी राखेका छन् । उनीहरुका अनुसार बिरामीमाथिको निरन्तर परीक्षणपश्चात यस कुराको टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरस परिवारकै अन्य दुइथरि भाइरसमध्ये सार्स एकथरि जंगली बिरालोबाट र मर्स ऊँटबाट मानिसमा सरेको थियो ।
एक अध्ययन अनुसार ४ वटा नयाँ वा देखा पर्दैगरेका रोगमध्ये ३ वटा जनावरबाट मानिसमा सर्ने गरेका छन् ।
बेसार, बोझो र लसुन प्रयाग गरी यसबाट बच्न सकिन्छ ?
नेपालमा घरेलु ओखतीका रुपमा यिनको प्रयोग सदियौँदेखि हुँदैआएको छ । तर हालसम्म औषधि वा खोप पत्ता नलागेको कोभिड-१९ भनिने यो रोग बेसार, लसुन वा बोझोको प्रयोगबाट निको हुने प्रमाणित तथ्य होइन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसखाले भ्रम चिर्न प्रकाशित गरेको लेखमा भनिएको छ, “लसुन स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हो र यसमा केही सुक्ष्म जीवाणुनासक तत्व हुन्छन् तर यसले कोरोना भाइरसबाट बचाउँछ भन्ने पुष्टि भएको छैन ।”
कोरोना भाइरसबारे जान्नै पर्ने १० तथ्य
रक्सी खायो भने यो निको हुन्छ ?
घर वा कार्यालयको वातावरण स्वच्छ राख्न प्रयोग गरिने ‘ह्याण्ड स्यानिटाइजर’ मा अल्कोहल (रक्सी) को केही मात्रा हुने भएकाले रक्सीको सेवन गर्‍यो भने यो रोग निको हुने अफवाह सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाको सिडिसीका अनुसार ह्याण्ड स्यानिटाइजरले सतहमा रहेका जीवाणुलाई मार्छ । तर रक्सीको सेवन गर्दा यसबाट बच्न नसकिने जनाइएको छ।
यसबाट बच्ने उपायहरु के छन् ?
यसबाट संक्रमित व्यक्तिबाट आफुलाई टाढा राख्ने र आफुलाई संक्रमण भए अरुलाई नसार्नु नै यसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको चिकित्सकहरुको ठहर छ । उनीहरुले सार्वजनिक ठाउँमा गएर फर्केपछि वा भेटघाट पछि हात साबुन पानीले राम्रोसित धुने र हात नधोई आँखा, नाक र मुखमा नछुने सुझाव दिएका छन् । मास्क लगाउँदैमा यो पूर्णरुपमा नरोकिने पनि बताइएको छ तर संक्रमितले आफुबाट अरुलाई नसार्नका लागि यसको प्रयोग सुझाइएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा वा भेटघाट नगर्ने सुझाव छ । यो रोग श्वाप्रश्वासमार्फत र संक्रमित स्थल वा व्यक्तिलाई छोएमा सर्ने भएकोले हाछ्युँ गर्दा छोपेर गर्ने र हात बारम्बार धुने सुझाव स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिएका छन् ।
थप सूचना सामाग्री:
जोन्स हप्किन्स विश्वविधालय
विश्व स्वास्थ्य स‌ंगठन
तथ्य जाँच भारतीय जनरल रावत चढेको हेलिकप्टरको भिडियो भन्दै भ्रामक दाबी
तथ्य जाँच टिकटकमा यसरी फैलाइयो लकडाउन बारे भ्रामक भिडियो
यस्ताे छ युक्रेनमा रुसले हालै गरेकाे आक्रमणकाे भन्दै फैलाइएका फाेटाेकाे वास्तविकता युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले केही दिनयता त्यसम्बन्धी सामग्री शेयर गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर लगायतमा युक्रेनमा जारी युद्धका भन्दै विभिन्न फोटो... विस्तारमा